Ama-Dead Side Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
I-Gamepron ine-Deadside Hacks ephelele yazo zonke izidingo zakho zokudlala. Noma ngabe i-Deadside Aimbot, i-ESP, iWall Hack, noma i-NoRecoil, wonke ama-Deadside Hacks athandwa kakhulu alapha.
Usuvele uthenge iHacknite Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-hacks wethu we-Deadside, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kuvuselelwa noma lisasebenza ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu Okubiwe Hacks
Ama-Deadside Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iWall Hacks nokuningi
Thenga Okubiwe Ama-Hacks angenile 4 izinyathelo
Khetha umdlalo ongathanda ukuwuthenga ngamathuluzi, sinemidlalo eminingi esingakhetha kuyo
Njengoba kunezici eziningi zokugenca ezitholakalayo, khetha leyo evumelana nezidingo zakho zokukopela
Yenza inkokhelo yakho! Izinkokhelo zethu zizophathwa kusetshenziswa iprosesa yethu yokukhokha ekhethekile etholakala lapha kuphela.
Finyelela Ukhiye Wakho & Landa ama-Deadside Hacks!
Ngemuva kokuthola ukhiye womkhiqizo ku-Gamepron ungalanda ama-cheats akho ngokufanele
Kungani Usebenzisa i-Gamepron Deadside Hacks?
I-Deadside ngomunye umdlalo wokusinda ozohlola amandla akho, ngoba abantu abaningi ngeke babe nesineke esidingekayo sokwenza inqubekela phambili enkulu kulo mdlalo. Kunezinto eziningi okufanele uzigaye ngenkathi udlala i-Deadside, okusho ukuthi izinto zingabonakala “ziyisidina” kunalokho masinyane - uma ufuna ukujabulela umdlalo ngokugxila ezingxenyeni ezimnandi, kunokuphikisana nemidlalo nje, usebenzisa I-Deadside Hacks izokwenzela izimangaliso. AmaGamers azokwenza noma yini edingekayo ukuwina i-Deadside, futhi kungenxa yokuthi lokhu akuwona umdlalo wendabuko! Kufana kakhulu ne-Escape from Tarkov ngomqondo wokuthi uzoqoqa izinsiza nezinye izinto eziwusizo (njengezikhali, izikhali, nezimonyo), futhi nangendlela yokuthi abadlali abaningi base-Deadside banamakhono amangalisayo. Noma ngabe uzama ukuphanga njalo noma ubamba iqhaza kwi-PvP (Player Versus Player), kuzoba nethuba lokuthi wonke umuntu abe nokuncane nge-Deadside.
Ungakhetha ukusebenza eceleni kwabangane bakho bese uzulazula ogwadule oluyincithakalo manje oselubiza ngokuthi yikhaya, noma ungakhetha ukwehla ngomkhondo wempisi eyodwa. Noma yini okhetha ukuyenza ayinandaba, njengoba iHackside Hack yethu izokugcina ukukuhlomele ukusingatha noma isiphi isimo esiza kuwe. Noma ngabe kukhishwa abaphikisi besebenzisa i-Deadside Aimbot yethu noma ukugcina nje amathebhu endaweni yabo ne-Deadside Wall Hack, izici eziningi eziwusizo zizokusiza uthole impumelelo kumdlalo.
Onke amathuluzi ethu athuthukiswa yithimba lethu lochwepheshe noma imithombo evela komunye wozakwethu abathembekile, wonke owaziwa emphakathini wokugenca. Ekugcineni ungathokoza lapho uvula i-Deadside ngokukhohlisa kwethu kunikwe amandla, njengoba wazi ukuthi kuzoba yinto eyanelisayo njalo lapho ulayisha umdlalo phezulu. Akugcini lapho kepha ukusebenzisa zonke izici ezimangazayo ezifakiwe ngaphakathi kweHackside Hack yethu akusiyona inqubo enzima. Sihlehlise inqubo ukuze nabasebenzisi be-novice kakhulu bezokwazi ukuzuza kuma-Deadside Hacks ethu!
Ngokuzayo lapho ucabanga ngokugenca kumdlalo wakho owuthandayo (noma ngabe yi-Deadside noma enye into), khumbula nje ukuthi i-Gamepron ingumhlinzeki we- # 1 wama-Deadside Hacks adumile ngesizathu!
I-Deadside Wall Hack (ESP)
Imininingwane ye-Deadside Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
Into eseceleni ye-Deadside ESP enezihlungi
Izixwayiso zesitha esiseduze
Imodi ye-Deadside super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza).
I-Deadside bone & ukhiye wokuhlose okulungisekayo.
Isinxephezelo se-Deadside Recoil
Impela Okubiwe Hack Izici
I-Deadside Player yethu i-ESP iyithuluzi elikuvumela ukuthi ubone amathambo omdlali wesitha ngokusebenzisa izindawo ezi-opaque neziqinile, okusho ukuthi uzobona izitha ngezindonga!
Awukwazi kuphela ukubona amamodeli wesidlali ngezindonga, njengoba olunye ulwazi oluwusizo njengamagama abo, ezempilo, kanye nebanga likhona.
Sebenzisa i-Deadside Item ESP ngezihlungi ukuthola yonke impango enhle kakhulu! Akudingeki ukuthi uchithe isikhathi ngezinto ezintula lapho usebenzisa i-Gamepron.
Ukusebenzisa i-Deadside Aimbot ngeke kukunikeze kuphela amandla adingekayo ukuze uthathe isitha esisodwa kepha kaningana ngasikhathi!
Ithrekhi ye-Deadside Bullet (esebenza ngamabanga amafushane naphakathi)
Sikunikeza nenketho yokulandela ngomkhondo izinhlamvu zakho usebenzisa isici se-Bullet Track, esilungele isibhamu esifushane nesiphakathi nendawo.
Umlayezo oyisixwayiso uzoboniswa esikrinini sakho noma kunini lapho isitha sihlose uhlamvu lwakho, noma zivele zisondele.
Imodi ye-Deadside super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza)
Ukonakala kokuwa kuzokubulala ngesikhathi esithile, lokho kungukuthi ngaphandle kokuthi uhlela ukusebenzisa iHackside Hack yethu ngeSuper Jump Mode!
I-Deadside bone & ukhiye wokuhlose okulungisekayo
Ungalungiselela i-Deadisde Aimbot yethu ngezindlela eziningi ezahlukahlukene, njenge-Bone Prioritization ngisho nenketho ye-Instant Kill!
Ukuhlolwa okubonakalayo kwe-aimbot okubonakalayo
Sebenzisa isici se-Visible Checks ukugcina amathebhu lapho isibhamu sakho sifika khona. Ungaqinisekisa ukubulala nokulimaza kalula ngokusebenzisa lesi sici!
Ukuthola kabusha kuyinkinga ngezizathu ezisobala, ngoba kuzokonakalisa ukunemba kwakho. Susa futhi udubule ngokuzethemba okukhulu!
Yiba Umdlali Ohamba phambili ohamba phambili ePlanethi
I-Deadside ngumdlalo ozokuvuza ngomusa uma wenza umsebenzi kahle, futhi yilokho iHackside Hack yethu ezokusiza ukukufeza. Asikho isitha kulo mdlalo ongeke usishaye usebenzisa iHackside Hack yethu, futhi uma usuzizamele, uzoqonda ukuthi sivelaphi. Sebenzisa leli thuba futhi uthole isandla esiphakeme phezu kwezitha zakho ngokusebenzisa i-Deadside Cheats yethu!
I-Deadside ESP neWallhack
Amanye ama-Deadside Hacks nama-Cheats
Sine-Deadside Hacks nama-Cheats athandwa kakhulu kuphela atholakala lapha e-Gamepron, njengoba sinezinga elithile lamazinga okufanele siwasekele. Lapho uthenga ithuluzi kithi, unokulindela okuthile esizohlangana nakho njalo - yingakho sithathwa njengonjiniyela wekhwalithi ephezulu kakhulu kuwebhu njengamanje! Ngenkathi ezinye izinkampani zijija izithupha zazo futhi zichitha isikhathi ngezici eziwusizo, sizokunikeza kuphela amathuluzi amahle kakhulu. Lokhu sikwenza ngokulinganisa lokho abantu abafuna ukukubona kuma-Deadside Hacks ethu bese sisebenzisa lezo zici ngokufanele. Ungalindela ukubona imiphumela lapho ukhetha ukukopela ngeGamepron, njengoba izici zibonakala zingapheli!
Nge-Deadside Aimbot, i-ESP, iWall Hack, neNoRecoil ohlangothini lwakho, ayikho indlela yokutshela ukuthi uzothatha izinto kude kangakanani. Ngeke uphinde ulahlekelwe esinye isibhamu sempi lapho kwenziwa i-Deadside Cheats yethu! Wina imidlalo eminingi namuhla nge-Gamepron.
Njengoba ama-Deadside Hacks amaningi ebenganikela, sikunikeza ukufinyelela kwi-Deadside Aimbot engcono kakhulu etholakala ku-inthanethi. Kungcono kakhulu kunezinye izindlela ezitholakala ku-inthanethi ngenxa yazo zonke izici ezifakiwe ngaphakathi, njengoba sikuvumela ukuthi wenze ngezifiso isipiliyoni sakho se-aimbot. Ungasebenzisa leli thuluzi ukugcina ukunemba kwakho kubulala ngaso sonke isikhathi, njengoba ungavumela ukuthandwa kokubulala oku-Instant kanye ne-Bone Prioritization ukubulala izitha zakho ngendlela ngqo oyithandayo. Ungakhetha ukugxila emakhanda abo, ukukunikeze ama-headshots amaningi (nokubulala okuningi!) Ukwedlula noma ngubani omunye kuseva. I-Deadside Aimbot yethu ihlanganiswe ngokuphelele, ivumela abasebenzisi ukuthi bangene esenzweni bese beqala ukubulala izitha ngokuthanda kwabo. Abanye abantu bahwaqabala ngenxa yokugenca, kepha abaqondi ukuthi sivelaphi. Lapho usujwayele ukuba nenhloso yokungabi namandla, noma ihora noma amabili wokusebenzisa i-Deadside Aimbot yethu kuzokwanela ukushintsha umqondo wakho.
Sebenzisa i-Deadside ESP yethu emangalisayo ukugcina amathebhu kubaphikisi bakho, futhi uthole ukuthi aphi amathuba amahle okuphanga! I-Deadside ngumdlalo okuphanga njalo, futhi lokho kusho ukuthi ukusebenzisa i-Item ESP yethu ngezihlungi kuzokushintsha lokho kube yinselelo kube ngumoya. Ungathola izikhali ezinhle kakhulu nezikhali ngokusebenzisa i-Deadside ESP yethu neWall Hack ukubheka ezindaweni eziqinile, kukunikeze isithombe esiphelele salokho okungakolunye uhlangothi. Lokhu kuyasiza futhi uma usola ukuthi izitha zicathama ngakolunye uhlangothi, njengoba ungavula iHackside Wall Hack bese uziveza ngomzuzwana.
Noma ngabe uhlela ukudlala wedwa noma nabangani, ukusebenzisa i-Deadside ESP yethu neWall Hack kuzokusiza uthuthuke futhi uthole impango engcono ngaphandle kokuchitha isikhathi. Lokho kugaya okude futhi okunesidina kuzofinyezwa, nokuyikho konke ongalindela ukukuthola!
I-Deadside Hack yethu iphinde ifake ukuthandwa kwesici se-Footprints, esilungele uma ulandela isitha futhi ulinde isikhathi esifanele sokuteleka. I-Deadside imayelana nesikhathi, ngoba awufuni ukushesha ungene ngokushesha - ukusebenzisa isici seFootprint ukuze ubambe inyamazane yakho kuhle, kepha futhi udinga ukwazi ukuthi uyasondela noma cha. Yilapho kusebenza khona isici Sokulimaza Okuphezulu, ngoba uzokwazi ukubona ukuthi isitha sakho sikude kangakanani ngaphambili. Lokhu kwenza ukubandakanyeka kube lula ngesikhathi njengoba wazi ukuthi uzoba seduze nini; ngaleso sikhathi, sekuyisikhathi sokulungiselela impi!
Nika amandla isici se-Damage High futhi ubenze bafise ukuthi ngabe abakaze bajoyine iseva yakho. Uzokwenza umonakalo omkhulu kakhulu kunanoma yimuphi omunye umphikisi ohlangabezana naye, futhi isici se-Distance sizoqinisekisa ukuthi awudingi ukubhekana "nokuhlaselwa okungalindelekile".
Kunezinye izinto eziningi ongacabanga ukuzuza kuzo ngenkathi usebenzisa iHackside Hack yethu, yingakho amakhasimende ethu ezimisele ukubeka ukholo lwawo ku-Gamepron. Lapho wazi ukuthi ithuluzi linazo zonke izici ongazifuna, kungani ungazihlupha nomunye umhlinzeki? Singakusiza ufeze noma yini ongathanda ukuyenza ngenkathi udlala i-Deadside, kumane nje kuyindaba yokuthola ukufinyelela kuma-Deadside Hacks wethu angenacala nama-Cheats. Siphinde futhi sinikeze ngezici abanye abahlinzeki be-hack abahluleka ukuzifeza ngokwabo, njenge-2D Radar kanye nesici sezexwayiso esizokugcina uqaphele ngaso sonke isikhathi. Ukudutshulwa ngemuva kuyinto yesikhathi esedlule lapho ukopela ngeGamepron!
Ungakugwema ukuthatha umonakalo wokuwa futhi ufe futhi, njengoba i- "Super Jump Mode" yethu izokuvumela ukuthi uwe kusukela emaweni aphakeme ongawacabanga ngaphandle kokulimaza. Lokhu kungaba wusizo olukhulu lapho ukhona
ngenkuthalo uzama ukugwema isitha!
Ama-Hacks we-Deadside Imibuzo
Kungani ama-Deadside Hacks ethu
Uma ufuna ukuzizwa sengathi usebenzise imali yakho endaweni efanele, ukusebenzisa i-Deadside Hack yethu kuyindlela engcono kakhulu ongayenza. Ngazo zonke izici ezihamba phambili ozifuna kuHackside Hack, kuncane kakhulu izitha zakho ezingakwenza ukukuvimba ekuwineni; nge Deadside bakhohlise inikwe amandla, uzoba umshini non-stop ngokuwina.
Kungani i-Deadside Aimbot yethu
Kukangaki uthola ukuthi inhloso yakho incane? Noma ngabe unosuku olubi futhi ungenza kangcono, kuzoba nomthelela ekutheni ubona impumelelo engakanani kumdlalo. Uma ufuna ukuwina iningi lemidlalo yakho ngaphandle kwemibuzo ebuziwe, ungathembela ku-Deadside Aimbot yethu ukuletha imiphumela oyifunayo.
Kungani i-Deadside ESP yethu
Ukusebenzisa i-Deadside ESP yethu kufanele, ngoba ngeke nje ukwazi ukubona izinsongo ezingaba khona ngokusebenzisa izindawo eziqinile, kepha uzoba nethuba lokubona impango enhle ngaphezulu kwalokho! Awudingi ukuchitha sonke isikhathi sakho uhlunga izakhiwo ezingapheli, njengoba ungasebenzisa i-Item ESP ngezihlungi ukuthola ukuthi zicashephi zonke izikhali ezihamba phambili (futhi ziphanga!)
Kungani i-Deadside Wallhack yethu
Nge-Deadside Wall Hack yethu, ungabona izitha kuzo zombili izindawo eziqinile futhi ezi-opaque, ezenza ukuhlelela ukuhlaselwa nokuhlaselwa kube lula. Uzohlala wazi lapho isitha sicathama ngakolunye uhlangothi lodonga ngalesi sici sinikwe amandla, futhi kumdlalo wokusinda onjenge-Deadside, leyo yinto ofuna ukuyibona.
Kungani i-Deadside Norecoil yethu
Ukubuyiselwa kwakho ohlangabezana nakho ku-Deadside kungokoqobo njengoba kwenzeka, futhi noma ngubani owazidlalela lo mdlalo angakufakazela lokho. Lapho ukubuyela emuva kukulahlekisela ngezibhamu kaningi, izingqinamba yisikhathi sokuthi uthole ukufinyelela kuHackside Hack yethu. Uzozibuza ukuthi uwudlale kanjani umdlalo ngaphambili lapho usuzame umsebenzi wethu weNoRecoil okokuqala.
Ungawalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu we-Deadside?
Ama-Deadside Hacks amahle kakhulu ayatholakala khona lapha eGamepron, noma ngabe uthini omunye umuntu. Kuzoba nezinsizakalo laphaya ezithi zinama-hacks amahle kakhulu, kepha lokho akulona iqiniso; uma ungayitholi ku-Gamepron, ngeke kube yiHackside Hack engcono kakhulu. Beka unyawo lwakho oluhamba phambili futhi uthenge okhiye bethu bomkhiqizo namuhla!
Kungani ama-hacks wakho we-Deadside abiza kakhulu kunamanye
Sinezindawo ezimbalwa kakhulu ezitholakalela abasebenzisi bethu lapha eGamepron, okusho ukuthi kungahle kube nezikhathi lapho ungakwazi ukuthenga khona. Ngenxa yalokho, amanani entengo okhiye bethu bomkhiqizo bekufanele enyuswe ngenxa yezinkonzo zethu kuphela - hhayi lokho kuphela, kodwa i-Deadside Hacks (nokunye ukukhwabanisa esikunikezayo) ayi-100% engatholakali.
Sikunikeza ithuba lokuthenga ukhiye womkhiqizo cishe nganoma yisiphi isikhathi esibekiwe ongacabanga ukuthi uyasidinga, njengoba sikunikeza okhiye bomkhiqizo nsuku zonke, masonto onke, nangenyanga zonke. Ungagenca isikhathi eside noma esincane njengoba ungathanda lapho ukhetha ukukopela ngeGamepron, njengoba sibeka amandla ngqo ezandleni zabasebenzisi bethu.
Awesome Okubiwe Hack Izici